UEFA oo amar dul dhigtay garsoorayaasha kulamada UCL. | Ciyaaro Online
Home - CIYAARAHA CAALAMKA - UEFA oo amar dul dhigtay garsoorayaasha kulamada UCL.
UEFA oo amar dul dhigtay garsoorayaasha kulamada UCL.
Xiriirka Kubadda Cagta Qaaradda Europe ee UEFA ayaa amar ku rogay garsoorayaasha dhex dhexaadinaya ciyaaraha wareegga 16ka ee tartanka Champions league.
Warbixin ay soo saareen xiriirka ayaa garsoorayaasha lagu amray in ay aad ula socdaa ilamarkaana koontarool ku sameeyaan caafimaadka ciyaartooyda inta ay gudaha garoonka ku jiraan.
Kooxo ka mid ah kuwa ka qeyb qaadanaya tartankan ayaa xiriirka weydiistay in ay muhiim tahay daryeelka ciyaartooyda marka qaladaadka lagu galo iyada oo garsoorayaasha inta badan ay u fiiriyaan natiijada kubadda cidda ay lugta ugu jirto kaddibna marka ay dhinaca u dhamaata u soo laabta ciyaartooyda dhaawacantay.
Xiriirka ayaa hadda garsoorayaasha amray in ciyaaryahan dhaawacan oo garoon ku jira aan kubadda la socod siin,taas oo xeerka mararka qaar uu garsooraha siinayo in uu sii wadi karo ciyaarta haddii cidda qaladka lagu galay lugta ugu jirto kubadda.
Tababaraha Kooxda Man City Pep,ayaa ka mid ah Macallimiinta codsigan u gudbiyay UEFA kaddib markii uu ka naxay sida ay uga dhaawacmeen ciyaartooy muhiim u ah,kuwaas oo bilo ka maqan markii ay dhaawacmayeenna ay garsoorayaasha kubadda socodsiiyeen.
Madaxaha garsoorayaasha UEFA Pierluigi Collina ayaa garsoorayaasha uga digay in ay deystaan ciyaaryahan dhaawacmay iyaga oo iska fiirinaya natiijada goolka weerarka lagu yahay.
Kulamada ugu soo horreeya wareegga 16ka ayaa caawa waxaa isku arkaya kooxaha kala ah Manchester City vs Basel iyo Tottenham vs Juventus,waana kulamada sida gaarka ah caawa loo daawanayo iyada oo Habeen dambe ay jiri doonto ciyaar ka mid ah kuwa sida gaarka ah loo xiiseynayo waxaana iska hor imanaya PSG iyo Real Madrid.